Frankofonia : anehoana ny maha Malagasy | NewsMada
Frankofonia : anehoana ny maha Malagasy
Par Taratra sur 08/07/2016
Fotoana iray anehoana ny maha Malagasy antsika ny fahatongavan’ireo vahiny marobe, samy avy any amin’ny firenena mampiasa ny teny frantsay, na ity tenim-pirenena ity aza no tena mampiray eto. Izay indrindra no antony hanatontosana fampirantiana hosodoko, eny amin’ny CCI Ivato, manomboka androany hatramin’ny 12 jolay izao. Tanterahina amin’io fotoana io mantsy ny fivorian’ireo parlemantera frankofona.
Miisa fito ny mpanakanto mpanao hosodoko mandray anjara amin’ity hetsika ity. Anisan’izany i Michel Randria, tsy zovina intsony eo amin’ity sehatra ity, nanomboka ny taona 2000 ary efa nitety firenena maro, toa an’i Etazonia sy ny tany Eoropa, naneho ny sanganasany.
Araka ny nambaran’ity mpanao hosodoko ity, hahazo vahana kokoa ireo sary mampahafantatra ny kolontsaina malagasy. « Ilain’ireo vahiny izany, ahafahany maminavina ny mety ho hitany mandritra ny fitsidihan’izy ireo an’i Madagasikara », hoy hatrany ity mpanakanto ity.
Miisa dimy eo ho eo avy ny sanganasa avy amin’ny mpandray anjara ho hita mandritra ity fivoriamben’ny parlemantera frankofona ity. Ho an’i Michel Randria manokana, efa voaomana ireo tabilao haranty.